गर्ने होइन त योग ? यी हुन् योगका फाइदाहरु - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७६ जेठ ८ गते १५:४९
काठमाडौँ । रोग लाग्नै नदिन के गर्नु पर्ला ? सही खानपान, आराम तथा सन्तुलित र स्वस्थ जीवनशैलीले हामीलाई चुस्त राख्ने गर्दछ । हिजोआज सबै उमेर समूह तथा वर्गका मानिसहरुले स्वस्थ रहन विभिन्न उपायहरु अपनाउने गरेका छन् ।
यौनशक्ति बढाउँछ : आजको अति व्यस्त जीवनशैलीको प्रभावले मानिसको यौन जीवन तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । यसको समाधानको रुपमा योगले मूख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।